Qiimaha guryaha ee Norway oo sare u kacay 2% bishii Febraayo Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaQiimaha guryaha ee Norway oo sare u kacay 2% bishii Febraayo
March 4, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Qiimaha guryaha ayaa kor u kacay 2% bishii Febraayo. qiimaha guryaha ee Norway wuxuu sare u kacay 9.7% labadii iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay.
Kordhinta ayaa ugu xooganeyd Oslo, Bodø oo ay weheliso Fauske, iyo Stavanger iyo nawaaxigeeda.
saro u kaca suuqa guryaha. ayaa ka xoog badneyd kaliya bishii Febraayo ee 2009 markii suuqa ka soo kabsaday dhibaatada dhaqaale.
“Waxaan rajeyneynaa kororka sii socda ee sicirka guryaha mustaqbalka Maaddaama xaaladdu hadda tahay, kaliya dulsaarka sare ayaa yareyn kara sare u kaca qiimaha suuqa guryaha, ayay tiri Henning Lauridsen, oo ah agaasimaha shirkadda Eiendom Norge.
Waqtiga wareejinta iibka guri wuxuu hoos uga dhacay 60 maalmood Janaayo ilaa 52 maalmood Febraayo. Magaalada Oslo, celcelis ahaan waxay qaadatay 18 maalmood in la iibiyo guri.
Oslo waxay yeelatay koror xilliyeed ah 2.4% – sidaas darteed, waxay laheyd kororka qiimaha ugu xoogan wadanka. 12-kii bilood ee la soo dhaafay, waxaa kordhay qiimaha guryaha ee 15.2% caasimada.